LOOP SOKUVALWA STEPPER MOTOR
BLDC motor umshayeli
iluphu avaliwe motor umshayeli
stepper motor umshayeli
nema17 ukubopha motor
nema23 ukubopha motor
Ngekusebentisana, ezikhulayo ndawonye!
Singayisebenzisa kanjani stepper motor
umlawuli ku 18-05-29
Stepper ukulawula imoto yidivayisi elawula isikhundla, isivinini kanye ne-torque engu drive lokukhanda. It yakhelwe ukulawula ukunyakaza kwama-motor kagesi. It has automatic transmission kanye Imanuwali ukuqala futhi ephumula injini, futhi ukukhethwa kanye ukulungiswa isivinini. Futhi kulindeleke ukuba se ...
Ukuhlolwa stepper motor (A)
Stepper motors ngokuvamile ka microprocessors noma ngokwezifiso isilawuli ICS, namandla ngokuvamile ilawulwa izifunda ovuthayo stepper motor umshayeli namandla transistors. ukunyakaza eqondile kungenzeka, kodwa eyinkimbinkimbi ngokuvamile izwe stepper amateur ku "mhlawumbe ngelinye ilanga" bin izingxenye. Kodwa stepper ...
Ukuhlolwa stepper motor (B)
Stepper motor uhamba izinyathelo ezincane ngokuvamile wabonisa kwilebula ngokwamazinga. Isinyathelo motor spin kwelinye isiqondiso lwamanje idlule ikhoyili ke omunye, khona-ke emazombezombe lokuqala polarity okuphambene, khona-ke yesibili polarity reverse, futhi. Lokhu ukulandelana iyaphindwa ngoba c ...